ट्रम्प–किमको संयुक्त हस्ताक्षरः ३८ मिनेट वार्तापछि ट्रम्पले लिए ‘कोरियाली प्रायद्वीपको सुरक्षाको ग्यारेन्टी’
निर्माण सञ्चार, एजेन्सी । विश्वको नजर खिचिरहेको अमेरिका, उत्तरकोरिया वार्ता सहमतिमा टुंगिएको छ । उत्तरकोरियाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएपछि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले संयुक्त दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाले पनि कोरियाली प्रायोद्वीपमा परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्दै जाने सहमति जनाएको छ ।
मंगलबार भएको वार्तामा दुई नेताबीच भएको सहमति अनुसार उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रम बन्द गरेबापत अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने भएको हो ।
तर, यो प्रारम्भिक वार्ता हो, यसलाई शिखर वार्ताबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।
दुई राष्ट्रपतिहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर भने शिखर वार्ताको अन्त्यमा मात्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
दुई राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाको सुरक्षा ग्यारेन्टीको जिम्मा लिएका छन्, नेता किम जोङ उनले कोरियाली प्रायोद्वीपमा परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।’
यसरी दुई देशबीचको ऐतिहासिक वार्तासँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ट्रम्प र किमबीच सिंगापुरको सान्तोसा आइल्यान्डस्थित होटलमा भेटवार्ता भएको हो ।
३८ मिनेट वार्ता
दुई नेताबीच ३८ मिनेट वार्ता भएको थियो ।
संयुक्त दस्ताबेज हस्ताक्षर गर्नुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले निकै राम्रो कुराकानी भएको सञ्चार माध्यमलाई बताए । उनले कोरियासँगको सम्बन्ध विगतभन्दा अर्को अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किमले विगतलाई छाडेर अघि बढेको र विश्वले आश्चर्यजनक परिवर्तन पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दस्तावेजमा हस्ताक्षरपछि दुवै नेताले हात मिलाएका थिए ।
दुवै नेताले एकअर्काेमा हात मात्र नभई मन पनि साटिएको बताए । फोटो सेसन क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ थियो, ‘नेता किम निकै चलाख रहेछन् ।’
दुई नेताले गरेको संयुक्त हस्ताक्षरले निम्न बुँदाहरुमा सहमति भएको उल्लेख छ—
१. शान्ति र समृद्धिको लागि दुवै देशको जनताको चाहना अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया) दुई देशबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापनाको लागि प्रतिबद्ध छन्
२. अमेरिका र उत्तरकोरिया दुवैले कोरियाली प्रायोद्वीपमा एक स्थिर र शान्त व्यवस्थाको निमार्णका लागि आ(आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नेछन्
३. अप्रिल २७, २०१८ को ‘पान्मुनजोन सम्झौता’लाई पुनःपुष्टि गर्दै उत्तर कोरिया कोरियाली प्रायोद्वीपको सम्पूर्ण निरस्त्रीकरणका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध छ
४. संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरिया युद्धबन्दीहरु र हराएकाहरुको खोजीमा प्रतिबद्ध छ र पहिचान भैसकेकाहरु युद्धबन्दीहरुलाई तुरुन्तै आ-आफ्नो देश फर्काइने छ यद्यपि यी बुँदाहरुमा भने उत्तरकोरियाको सुरक्षा जिम्मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएबारे उल्लेख गरिएको छैन ।